သတင်းများ - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
Fish Game Ocean King3 Plus Phoenix Avengers ကိုရိုက်ပါ
အက်မင်အပေါ် 2019-12-04 17:12:33
The Fish Game Ocean king3Plus Phoenix Avengers ရိုက်ပါငါးများကိုမိတ်ဆက်ခြင်းစနစ်သို့သွားပါ - စနစ်ညှိနှိုင်းမှု - အလေးသာမှုအဆင့်. odds အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအလေးသာမှုများကိုထိန်းညှိရန် HIGH သို့မဟုတ် LOW အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်. Guangzhou အချိန် - အာကာသကာတွန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီ, Ltd. နှင့်အတူ 20 သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကို, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအား. ကျွန်ုပ်တို့သည် Ocean King Fish Game စီးရီးကိုမြင့်မားစွာကိုင်တွယ်နိုင်သောကြောင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်ငါးမုဆိုးဂိမ်းစက်ပါဝင်သည်, ငါးဗီဒီယိုလောင်းကစားဂိမ်းစက်, ငါးမုဆိုးလောင်းကစားဂိမ်းစက်, Fish Hunter Arcade ဂိမ်း, slot ကဂိမ်းစက်, လောင်းကစားစက်များ，စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့နှင့်တိုင်ပင်ရန်ကြိုဆိုပါသည်.
ငါးစားပွဲလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3ငါးများဘဏ္Treာ၏နိဒါန်း Plus အားနဂါးသမ္မတကတော်
အက်မင်အပေါ် 2019-08-22 17:08:08
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောငါးဖမ်းစက်ပစ္စည်းများနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအားကျေနပ်လောက်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်ငါးဖမ်းစက်များပါဝင်သည်, ငါးအမဲလိုက်စက်များ, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများ, အမဲနှင့်ငါးဖမ်းဂိမ်း. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ငါးစားပွဲလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3Plus of Dragon Treasure of Lady ငါးများမိတ်ဆက်ခြင်းစနစ်သို့သွားပါ - စနစ်ညှိနှိုင်းမှု - အလေးသာမှုအဆင့်. odds အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအလေးသာမှုများကိုထိန်းညှိရန် HIGH သို့မဟုတ် LOW အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်. သငျသညျငါးအမဲလိုက်စက်အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများ, ငါးမုဆိုး Arcade ဂိမ်း, ငါးပစ်ခတ်မှု gamesetc စက်, စသည်တို့, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
ငါးသေနတ်ပစ်ဂိမ်း Game Ocean3Plus အား Blackbeard ရဲ့ Fury
အက်မင်အပေါ် 2019-08-14 10:08:41
ကျနော်တို့ငါးမုဆိုး Arcade ဂိမ်းထုတ်လုပ်ရန်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း, သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကငါး Arcade ဂိမ်း, စသည်တို့. ငါတို့မှာရှိတယ် 10 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို. ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်. ငါးသေနတ်ပစ်ဂိမ်း Game Ocean3Plus အား Blackbeard ၏အမျက်ဒေါသငါးများမိတ်ဆက်ခြင်းစနစ်သို့သွားပါ - စနစ်ညှိနှိုင်းမှု - အလေးသာမှုအဆင့်. odds အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအလေးသာမှုများကိုထိန်းညှိရန် HIGH သို့မဟုတ် LOW အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်. သငျသညျသမုဒ္ဒရာရှငျဘုရငျ Arcade ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်, ငါးမုဆိုး Arcade ဂိမ်း, စသည်တို့, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
အက်မင်အပေါ် 2019-07-24 17:07:28
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. ကျနော်တို့မျိုးစုံအမျိုးအစားထုတ်ကုန်ပေးနိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောငါးဖမ်းဂိမ်းအဖြစ်, ငါးအမဲလိုက်ဂိမ်း, ငါးစားပွဲ Arcade ဂိမ်း, ငါးမုဆိုးဂိမ်းစက်, စသည်တို့. သင်ဤအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ! Ocean King3Plus Raging Fire သည် TAS မှငါးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Ocean King3Plus Raging Fire သည် Ocean King တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်3Plus အားစီးရီးနှင့်က2~ 10 ကစားသမားများအတွက် configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်. Arcade ငါးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းများသူဌေး: Raging Dragon ကစားသမားသည် Raging Dragon ကိုဖမ်းမိသောအခါ , ၎င်းကိုဖမ်းရန်ကွင်းဆက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး Struggle Mode သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်. ရုန်းကန်နေစဉ်အတွင်း, နဂါးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြတ်တောက်မှုတိုင်းကပိုက်ကွန်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါးစားပွဲတင်အားကစားပြိုင်ပွဲ: Ocean King3Plus အား Blackbeard ရဲ့ Fury
အက်မင်အပေါ် 2019-07-15 10:07:52
ကျနော်တို့ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်ထုတ်လုပ်သည်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်းစက်, ငါးမုဆိုး Arcade စက်, slot ကစက်, ငါးအမဲလိုက်ဂိမ်း, စသည်တို့. ငါတို့မှာရှိတယ် 10 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို. ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်. ငါးစားပွဲတင်အားကစားပြိုင်ပွဲ: Ocean King3Plus အား Blackbeard ရဲ့ Fury: ၎င်းသည် Ocean King တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်3Plus အားစီးရီး. Ocean King3Plus အား Blackbeard ရဲ့ Fury2~ 10 ကစားသမားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောငါးဖမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ Arcade စားပွဲပေါ်မှာများအတွက် configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်. Blackbeard ၏ Ghost Ship ကစားသမားတစ် ဦး အားဖမ်းမိသောအခါ Blackbeard ၏ Ghost Ship များ၏ Ghost Ships များမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်ဖြတ်သန်းသွားမည်။. Poseidon Poseidon ကိုဖမ်းမိလိုက်တဲ့အခါမှာ Poseidon တိုက်ခိုက်မှုများစွာကြောင့်ကစားသမားကိုငါးဖမ်းဆီးနိုင်သမျှများများကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။. Crကရာဇ်ကဏန်းကစားသမားတစ် ဦး သည်perကရာဇ်ကိုဖမ်းမိသောအခါ
အက်မင်အပေါ် 2019-07-06 11:07:44
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငါးဖမ်းဂိမ်းစက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. ၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက, ကုမ္ပဏီသည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအယူအဆကိုစွဲကိုင်ထားပြီးငါးဖမ်းခြင်းဂိမ်းစက်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအဓိကထားခဲ့သည်. ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောငါးဖမ်းစက်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုစုဆောင်းခဲ့သည်, ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေးနိုင်သည်, မျိုးစုံဒေသများရှိဖြေရှင်းချက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ. ၏အစိတ်အပိုင်းများ 8 Ocean King ငါးဂိမ်းစက်တွင်ကစားသမားများပါဝင်သည်: 1. Game Kit Stability Program PCB ၏အဓိကဘုတ်အဖွဲ့. ရရှိနိုင်ရွေးချယ်မှု Connector ကို: VGA, DVI, HDMI. ဆန့်ကျင်- Cheater ငါ / O ဘုတ်အဖွဲ့. အသိဉာဏ်ဒီကုဒ်ဒါ 2. Operating system အိုင်စီဘီငွေလက်ခံသူသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်အလုပ်လုပ်သည် 1-100, အခြားအမျိုးအစား…
ထိပ်တန်း slot ကစက်ပေးသွင်း
အက်မင်အပေါ် 2019-07-03 18:07:32
In 1895, Charlie Fey နှင့် Jzplay Com တို့သည်ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ် slot machine ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်. ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းတွင်သုံးဘီးတပ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, တစ် ဦး အကြွေစေ့ -operated slot က, နှင့်အပြင်ဘက်စက်လှည့်တဲ့သွန်းသံ. မကြာခင်မှာပဲဂိမ်းစက်တွေဟာအရက်ဆိုင်တွေရဲ့အဓိကကျတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်, လောင်းကစားရုံနှင့်များစွာသောလက်လီစတိုးဆိုင်များ. လူများစွာသည်လူတို့အားညဥ့်အခါချမ်းသာစေသည့်ဤမှော်စက်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားကြသည်. မကြာခင်မှာပဲစက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းသည်. နည်းပညာတိုးတက်အဖြစ်, ကကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအမျိုးမျိုးသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်. အဆိုပါ slot ကစက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူလောင်းကစားတဲ့စက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျားချစ်ပ်ကြောင့်၎င်းကိုအမည်တပ်သည်. အဆိုပါ slot ကစက်၌ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်အတူသုံးမှန်ဘောင်ရှိပါတယ်. အကြွေစေ့ဆွဲထုတ်ပြီးနောက်, လှံတံစတင်ပါလိမ့်မယ် ...
အက်မင်အပေါ် 2019-07-02 16:07:05
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့တွင်စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကျေနပ်လောက်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်ငါးဂိမ်းစားပွဲလောင်းကစားစက်များပါဝင်သည်, ငါး Arcade ဂိမ်း , ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်, စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ထိပ်တန်းငါးဖမ်းစက်အမျိုးအစား: 1. အသက်အကြီးဆုံးစက်မှုပလက်တီနမ်စက်ပလက်တီနမ်စက်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်, တစ်ခုကချွတ်အမျိုးအစားပလက်တီနမ်စက်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်၎င်း၏ switch သည်အပိတ်နှင့်အချွတ်အမျိုးအစားသံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းကထိန်းချုပ်ထားသည်. အခြားတစ်ခုမှာ EI or EE သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ထပ်ဆင့်လွှင့်သူဖြစ်သည်, အဆုံးစွန်သောအဆင့်တွင်ထရန်စဖော်မာ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်. 2. အီလက်ထရောနစ်ပလက်တီနမ်စက်: အီလက်ထရောနစ်ပလက်တီနမ်…
ငါးဖမ်းစက်ရဲ့ features တွေ
အက်မင်အပေါ် 2019-06-29 11:06:58
ငါးဖမ်းစက်သည်စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးဂိမ်းစက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒီဂိမ်းကလူလေးယောက်စက်နဲ့လူ ၆ ယောက်သုံးစက်ကိုလူအများစုကိုတစ်ပြိုင်တည်းကစားနိုင်အောင်အသုံးပြုထားတယ်. ကစားသမားများသည်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကစားနိုင်သည်, နှင့်ပုံတွင်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးသောငါးအနိုင်ရငါးဖမ်းအမြောက်များကိုစတင်ပါ. ဂိမ်း၏သင်တန်း၌, သာမန်ငါးဖမ်းရမှတ်များအပြင်, စူပါလက်နက်များကဲ့သို့သောသေးငယ်သောချိတ်ဆက်မှုများလည်းရှိသည်, ငါး Array ကို, ပုလဲသေတ္တာများ, စူပါဆုများ, စသည်တို့, ကစားသမားရဲ့အာရုံကြောကိုလှုံ့ဆော်ရန်, ကစားသမားများကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်အံ့အားသင့်စရာများပိုမိုခံစားခွင့်ပေးသည်. ငါးဖမ်းစက်ရဲ့ features တွေ： 1. မြင့်မားသောပါဝါ, မြင့်မားသောလက်ရှိ, မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး. 2. မဟုတ်ဘူး…
18 Jul.2019 ဂျကာတာအင်ဒိုနီးရှားအပန်းဖြေ & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ, အဆိုပါဂိမ်းကစားခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတူတူလာဘယ်မှာ
အက်မင်အပေါ် 2019-03-04 15:03:45
အပန်းဖြေ & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ, အဆိုပါ Gaming အသိုင်းအဝိုင်းအတူတကွလာဘယ်မှာ TAS သည်အပန်းဖြေစခန်းသို့ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်နှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားဆော့ဝဲလ်အသစ်များကိုအသက်ရှူစေသည့်အရာများစွာကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။ & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ, နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်အရောအနှောထည့်သွင်း, ဂိမ်းစက်ပြင်စက်များနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းတွင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ. ရဲ့အပန်းဖြေအတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းဖြစ်လာမှသတ်မှတ်ထားကြပါစို့ & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ.